विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसँगको भेटवार्तापछि प्रचण्ड झन गम्भिर ! - नेपालबहस
| १४:४०:४२ मा प्रकाशित
५ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो बढेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड चिन्तित भएका छन् । ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएका प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाका क्रममा महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
भेटवार्ता पछि प्रचण्ड निराश र चिन्तित मुद्रामा प्रस्तुत भएकाे महासचिव पौडेलले बताएका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको भेटमा प्रचण्डले सचिवालय बैठक र नेकपाको भविष्यका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
ओलीले लगातार पदलोलुपता र व्यक्तिवाद हावी गरेको भन्दै पार्टी एकता टिक्ने सम्भावना कम रहेको प्रचण्डको निर्ष्कष छ । महासचिव पौडेलसँगको भेटमा प्रचण्डले अब मिल्नेभन्दा अलग अलग बाटोमा हिड्ने बारेमा ठोस निष्कर्ष आउने पनि बताएका छन् ।
यद्यपि अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर छलफल, सहकार्य र वार्ता हुने प्रचण्डको भनाई छ । प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि जवाफसहितको प्रस्ताव ल्याउने ओलीको तयारी छ । यसका लागि उनले १० दिनको समय पाएका छन् ।
अब मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ । यस्तै मंसिर १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रिय कमिटी बैठक बस्नेछ । दुवै बैठकले पार्टी एकता टुंग्याउने वा अलग्गिने भन्ने विषयमा नेतृत्वलाई म्यान्डेड दिनेछन् ।
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने ४५ मिनेट पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए ४६ मिनेट पहिले
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु ५५ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी ५९ मिनेट पहिले
कमला न्यौपानेको गीत किनाराको ढुङ्गा सार्वजनिक ३ दिन पहिले
नयाँ सरकारका लागि आधार पेश गर्न आह्वान १ हप्ता पहिले
सबैलाई महाब्याधीका बिरुद्ध एकाकार हुन प्रेरित गर्नु संचारकर्मीको दायित्व: अध्यक्ष पोखरेल ३ हप्ता पहिले
प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलहरुले लफडा निकालेपछि सुनुवाई प्रभावित ! २ हप्ता पहिले
बेल्जियमकी पूर्व महिला प्रधानमन्त्री कोरोनाका कारण गम्भीर अवस्थामा ८ महिना पहिले
प्रचण्ड–्नेपाल समुहका बिद्यार्थीले ओलीको पुत्ला जलाए ५ महिना पहिले
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक योजना सार्वजनिक ८ महिना पहिले
थापाथलीबाट एमाले मुख्यालय सञ्चालन,९ गते ओलीले उद्घाटन गर्ने २ महिना पहिले